အောင်အောင်၊ သန်းသန်း၊ ဆွေဆွေနဲ့ ညိုညိုတို့ အုပ်စု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အောင်အောင်၊ သန်းသန်း၊ ဆွေဆွေနဲ့ ညိုညိုတို့ အုပ်စု
အောင်အောင်၊ သန်းသန်း၊ ဆွေဆွေနဲ့ ညိုညိုတို့ အုပ်စု
Posted by phone_kyaw on Feb 7, 2012 in Aha! Jokes, Satire, My Dear Diary | 1 comment
ခုတလော ရှောက်သီးဆေးပြားရောင်းတဲ့ သူတွေ လက်တောင်မလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အောင်အောင်၊ သန်းသန်း၊ ဆွေဆွေနဲ့ ညိုညိုတို့ အုပ်စုကတော့ ဒီနှစ်မှာ စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်နေတယ်။ သူတို့ ရဲ့ အဆို၊ အက နဲ့ နွဲ့ ဟန်တွေကို ကာစတန်မာတွေက သဘောကြတယ်။ ရှောက်သီးဆေးပြားကလည်း ၂ဝ၁၁-ခုနှစ် ဦးသိန်းစိန် ကုမ္မဏီက ထုတ်တာဆိုတော့ ဦးသန်းရွှေရဲ့ လက်ယာနဲ့ မတူ။ တမူထူးနေတယ်။ အရသာရှိတယ်။ မရှိတာက အလုံးစုံရောဂါမပျောက်ဘူးဆိုပြီး ကာစတန်မာတွေက မှတ်ချက်ပေးကြတယ်။
အောင်အောင်၊ သန်းသန်း၊ ဆွေဆွေနဲ့ ညိုညိုတို့ အုပ်စုက ရပ်ကွက်တိုင်းကိုလှည့်ပြီးရောင်းတယ်။ ကရင်မရပ်ကွက်၊ မွန်မရပ်ကွက်တွေမှာတော့ အရောင်းရဆုံး။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက ကချင်မရပ်ကွက်မှာတော့ သူတို့ ရှောက်သီးဆေးပြားကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကချင်တွေစားချင်တာက ရှောက်သီးဆေးပြားမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့ က ခေါင်ရည်သောက်ပြီး ဓားကြီးနဲ့ ကခုန်ချင်နေတာလေ။
အသက်ကြီးပြီး ပွစိပွစိနိုင်တဲ့ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ ရှောက်သီးဆေးပြားကို ဝယ်မစားချင်ဘူး။ အဘွားကြီးက ဒီလိုပြောတယ်။ နင်တို့ ရှောက်သီးဆေးပြားက ငါငယ်ငယ်တုန်းက စားတဲ့ ရှောက်သီးဆေးပြားကိုမမှီဘူးတဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ငယ်ငယ်တုန်းရှောက်သီးဆေးပြားမျိူးလုပ်ပြီးရောင်းရင် ဝယ်စားမယ်လို့ ဆိုပြီး အောင်အောင်တို့ အုပ်စုကို အဝေးကနေ လှမ်းပြောနေတယ်။ အဘွားကြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့လို့အိပ်ရာထဲမှာလဲနေပြီ။ သူ့ ကိုတော့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီလို့ မှတ်ပါ။
နိုင်ခြံဂါး လဲ ထွက်ရောင်း အုံးမယ်၊ အခုတော့ လာဝယ်ပါ လို့ အော်ထားတယ်၊ နိုင်ခြံ ဂါးက တော့ ဘာဂါ တွေ စား ချောကလက်တွေ စားဆိုတော့ သိပ် မဝယ်ချင်ကြဘူး ၊ကျန်တဲ့ သူတွေက သူတို့ကတာ ထိုင်ကြည့်နေ
ရတာပေါ့၊ ဝယ်စရာလဲ မရှိ သူတို့ကလည်း မရောင်းဘူး။ ရှောက်သီးဆေးပြားတွေ က ချဉ်ပါတယ် လေ။ ၂၀၁၁ မှ လုပ်ပေမယ့် ရှောက်သီးက ဝယ်ထားတာ ကြာနေလို့ မလတ်တော့ ဘူး။